Xuub sireed oo si weyn u doonaya in uu xabsiga u taxaaabo dhammaan suxufiyiinta aan asaga ka amar qaadan iyo qaar ka tirsan wax garadka beelaha Muddullood oo la sheegay in ay ka biyo diidsan yihiin qorshaha uu Madaxeyne Cabdullahi Yuusuf ku doonayo in uu isaga horkoono beelaha Habargedir iyo Mudullood. Ruunkinet 10/04/07
Afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ah tifatiraha shabakadda Idamaale ayaa la sheegay in uu si weyn u doonayo in uu xabsiga dhigo suxufiyiinta badaxa bannaan ee aan asaga amar ka qaadan ama aan buun buunin dacaayadaha dowladda.
Mudane Xuseen Xuubsireed oo ay dad badani aamin sanyihiin in uu yahay nin si weyn u doonaya araagoosi qabqiil ayaa la sheegay in nabadgelyadiisu aad loo ilaaliyo.
Sidoo kale, Xuubsireed oo haatan lagu eedeynayo in uu xabsiga dhigay Wariyeyaal uu ka mid yahay Nadaare oo ka tirsan Televesionka Universal ayaa la sheegay in ay horay u diideen qaar ka tirsan suxufiyiinta Muqdisho ku sugan in ay la kulmaan ayagoo ka baqaya in ciidankiisa toogtaan ama xiraan.
Dhanka kale, waxaa la sheegay in wax garad ka tirsan beesha Muddulood ay ka biyo diideen abaabul uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ku doonaya in uu isaga horkeeno beelaha Muddullood iyo Madarkicis.
Madaxweyne Yuusuf ayaa la sheegay in uu ku guuleystay in uu ka dhaadhiciyo wasiir ku xigeenka gaashaan dhigga iyo mas'uuliyiin kale arrintaasi balse waxaa weli hortaangan qorshahaasi mas'uuliyiin iyo wax garad ka tirsan beelaha Muddullood sida aan ka helnay wax garad ku sugan wuquuyiga magaalada Muqdisho.